SDP waxay markasta ilaalisa inay sinaan kula dhaqanto dadka. Waxaan rabnaa in la dhiso bulsho cadaalad iyo dadnimo leh. Finland u ah , meel qof kasta lagu qiimeeyo oo la ixtiraamo. Waxaan rabnaa in la xoojiyo ammaanka iyo rajada mustaqbalka, si ay u abuuraan fayo-qabka degma kasta u Finland ah.
Dhamaan waan ka qayb qaadanayna.
Doorashooyinka degmooyinka waxaa la qaban doonaa 9 April. u codee dimoqradiga bulshada iyo saamaynta, in go’aamada lagu fuliyo hab tayo u leh qof kasta .
Waxaad leedahay fursad.
Waxaad u codayn kartaa doorashooyinka degmooyinka haddii aad Finland, Dal kale ee xubnaha ka ah EU, Norway ama Iceland kamid tahay u dagaankaagu ahaa Finland ugu yaraan 51 maalmood ka hor maalinta codbixinta ama aad tahay muwaadin dal kale ah deganaashana ku leedahay dalka Finland muddo joogto ah ugu yaraan laba sano.
Ujeeddooyinka SDP ee doorashooyinka degmooyinka.
Waxaan u baahanahay maal-gelin ilbaxnimada oo waa in lagu saxo barnaamijka dhismaha dugsiyada Finland . Waa in lagu daro hawlaha jimicsiga dugsi maalmeedka waqtigiisa . waxa loo baahanyahay maalin dhan dugsi maalmeed ah , u kordhinaysa saacadu dheeraad ah ay qoysku wakhtigooda ku wada qaataan. Waxbarashada ilmanimada hore waa in la bedelaa oo lacag la’aan laga dhigaa. Qoysaska waxa loo baahanyahay inay helaan xorriyadda doorashada meeleynta fasaxa qoyska iyo inay aabayaasho helaan fursadu fiican si ay ka qayb qaataan daryeelka carruurtooda.
Waxaan mar walba doonayana inaan ilaalino dadka nugul. Taasi waa sababta ay nooga go’antahay inaan u hogaansanaano dawladda samafalka ah waqooyiga ee adeegyada xoog leh iyo shabagyadoodii ammaanka.
Cusboonaysiinta adeegyada arrimaha bulshada iyo caafimaadka waa inay waafaqsanaata baahida dadka , maaha suuqa. hantida canshuurta waxa loogu talagalay adeegyada aadanaha. Caafimaadka iyo ladnaanto ma aha badeecad. waxaano rabnaa isgaarsiinta iyo soo saarista adeegyadu inay waafaq sanaadaan markasta qaybta dadweynaha , si ay u dhamaystirmaan ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo qaybta saddexaad.
Dawlada Finland waxay ixtiraamta ay tix galisaa dadka waayeelka ah . Waxaan rabnaa in daryeelka dadka waayeelka ah ay leeyihiin shaqaale ku filan goobaha daryeelka oo dhan.Waxaan rabnaa in aan hagaajino fursadaha dadka waaweyn si ay ugu noolaadaan si ammaan guryahooda iyaga o gaar ah iyo maalgashiga daryeelka guriga, baxnaaninta , adeegyada cuntada iyo taageerada daryeelayaasha.
Waxaan rabnaa inaan hormarino damaanada dhaliyarada. Qof kasta oo dhalinyaro ah wuxu u qalma jid waxbarasho, tababar ama shaqo. sannad guuradi 1ooth ee Finland waxay ku sharaftay dhalinyarada dhan shaqo xiliga xagaaga.
Waxaan u baahanahay fikir cusub xarumaha koritaanka, halkaas oo xuduudda dhulka iyo dhismaha o loo abuuro guryo dadka caadiga ah ay weheliso xidhiidhada gaadiidka dadweynaha oo wanaagsan.Waxaan rabnaa in aan bilaabno dayactir xaafadaheena , dibu dhiska iyo dib u cusboonaysiinta.
Waxaan rabnaa xoojinta dhammaan qaybaha nolosha aadanaha ee Finland gobollada aqoonta iyo waxbarashada iyo shaqooyinka. Waxaan u baahanahay maktabadda, adeegyada shaqeysa dhaqanka iyo isboortiga, iyo sidoo kale fursado madadaalo ah dalka dhan u kharash yar .
Waxaan rabnaa siyaasadaha suuqa shaqada firfircoon: warsiinta Xirfadaha , tababarka iyo kordhinta fursadaha tababarka iyo taageero ganacsi.